Queens International Night Market: The Complete Guide
Nyika dzakabatana New York New York City
by John Garay
Iwe unoda kurora zvakaoma-ku-kuwana zvokudya zvekuFar East nekuEurope? Ungada here kuongorora zvido zvekudya uye zvinonaka zvinonaka kubva kuLatin America neAfrica? Zvose pane imwe nzvimbo, zvishoma ?! Hapana chikonzero chokutenga tikiti yepaneti: Chengetai mutungamiri ku Queens International Night Market, muKorona, Queens! Chimbofungidzira kuisa makumi mashanu episodes yaAnthony Bourdain nemitambo yeTV Andrew Zimmern mune imwe manheru, uye iwe uchawana pfungwa yakanaka yehutano hunoyevedza hwepicurean hwakafanana.
Kicking musi waApril 22, 2017, Night Market inodzokera kunzvimbo yekupaka yeNew York Hall of Science muPlushing Meadows Corona Park kwechishanu chegore. Kushamiswa nekushanyirwa kwakakurumidza kukura kubvira pakusangana kwechiitiko chekubatsira chiitiko muna 2015, uye gore rino rinopikira kunyanya zvipo zvipo zvezvokudya zvinofadza uye zvisingaiti, zvigadzirwa zvemichina, mitambo, uye mimhanzi inorarama. Heino zvose zvaunoda kuziva nezvekuita zvakanyanya zve Queens International Night Market.
Chii chinonzi Queens International Night Market?
Ndiyo misika yegore negore, yemwaka, yakazaruka usiku iyo inosvika 45 kusvika ku50 vatengesi vezvokudya, mutengesi uye unyanzvi hwokutengesa, mabasa, uye maitiro, kusanganisira mimhanzi inorarama.
Ndiani anoronga Queens International Night Market?
Mugadziri weMusika John Wang, aimbova gweta rezvemabhizimisi, akafuridzirwa kubva mumusika wemusika mutsika weTaiwan, kwaakapedza nguva yakawanda yehucheche; ichi chido chake chakaendeswa kune vanhu vake vakuru, paaisarudza kushanyira misika yemunharaunda yega yega kuti azvininire mumitemo yakasiyana.
Kubhadhara kubva kune izvo zvakaitika, Wang aida kugadzira chimwe chinhu "chakanga chichienzanisa kushamisa kwesimba uye kudengenyeka kwemashamba eusiku pasi rose, asiwo yakaisa mararamiro asina kufanana akawanikwa pano mu NYC neQueens sebhuririro kune dzimwe tsika." "Sezvakataurwa naWang," kukwezva vashanyi uye vanotengesa vatengesi vanobva kunyika dzose dzinomiririrwa pano mu NYC. "
Queens International Night Market inobata rini?
Musika unoitwa musi weMugovera manheru, kubva pa1pm kusvika pakati peusiku. Nenguva yegore ra2017 inotanga neMugovera kubva musi waApril 22 kusvika August 19; yakateverwa nevhiki yevhiki yechitanhatu kwemaStudio Tennis mutsara uye Muenzi Faire, iyo inoitwa pedyo. Nguva yacho inotorazve zvakare musi waSeptember 30, ichimhanya kusvika paOctober 28.
Ndekupi iyo Queens International Night Market yakabatwa? Ndinosvika seiko ikoko?
The Night Market inobatwa panzvimbo yekupaka mushure meNew York Hall of Science muFilling Meadows Corona Park, muCorona, Queens.
Kune vanhu vashoma pakisimirira yepasimusi inowanikwa, saka varongwa vezviitiko vanorayira zvakasimba kuti vashanyi vanotora kuwanda kwekufambisa.
Pasi pepasi, vatengesi-vatengesi vanogona kutora chitima 7 ndokubva vaenda ku 111 th Street stop. Kubva pachiteshi, famba kumaodzanyemba kwezvikamu zvina pa 111 th Street (iyo nhamba dzezvikamu dzinofanira kuwedzerwa sezvaunofamba uchienda kumaodzanyemba), pfuura pasi pekupfuura, uye pakupedzisira uchaona New York Hall of Science kuvaka pamucheto weFlushing Meadows Corona Park , pakona ye 111 th Street uye 45 th Avenue. The Night Market iri mujenya mushure meimba. . . ingotevera mhomho, mheremhere, nemakwenzi emvura anopinza mumuromo.
Ndinofanira kutenga matikiti eQueens International Night Market here?
Kwete, iyo Night Night inobvumidza pachena, kunze kwezviitiko zviviri zvokutanga musi waApril 22 neApril 29. Ihwohwo husiku humwe hahuzobvumiri kufamba-ins asi pane zvinoda kutambira matikiti, zvichienderana nekudarika kwevanhu vakapinda mumakore apfuura ' kuvhura manheru, apo zviteshi zvezvitima zvaive zvakaputika-gadzika uye migwagwa / migwagwa / magwagwa akanga ari gridlocked. Izvi zviri kuitwa kunze kwekuremekedza nzvimbo yakapoteredza uye, maererano nevatsigiri, chikamu chinenge chikamu chemari inotambira kubva kutengesi yekutengesa ichaenda kumatambudziko emunharaunda. Ikokiti idzodzo inodhura madhora mashanu nemunhu mumwe nomumwe, uye inofanira kuwanika paWeens International Night Market website pakati peMarch.
Ndinofanira kutarisira mari yakawanda sei kuQueens International Night Market?
Affordability ndiyo yainyanya kukosha apo pfungwa ye Night Night yakagadzirwa; saka, kune mari yakawanda ye $ 5 mutengo wezvokudya pane zvinhu zvose zvekudya.
Gore rino, vamwe vatengesi vachabvumirwa kutengesa pamadhora e $ 6 mumatambudziko apo mararamiro avo emiganhu ndeye "razor-thin". Mutungamiri John Wang anoziva kunyatsochengetedza mararamiro evashambadzi vemashamba nemari yevatengesi avo ari, sezvaanotaura, "nyeredzi chaiyo ye Night Night." Iva nechokwadi chokuti chiitiko chicharamba chiripo uye mhuri-yakabatana: Hauzowani $ 35 foie gras popsicles pano.
Cherechedza kuti vatengesi vekudya vanowanzobhadhara mari chete, asi vatengesi / vhizimisi vhizha vanowanzogamuchira kubhadhara kadhi rechikwereti; pane inowanzove ATM panzvimbo.
Ndichati ndaona iyochete Queens International Night Market vatengesi segore rapera here?
Kunyange zvazvo vatengesi venharaunda ye 2017 vasina kugadziriswa zvakadaro, Wang ari kutema kuparadzanisa 50/50 kwevatengesi vekare nevatengesi vatsva. Zvimwe zvevakasimbiswa kuti vadzoke ndezvokutengeserana zvakakurumbira shure kweBurmese palata, Trinidadian shark sandwiches, uye maRomania chimney zvingwa. Uye vatsva vanosvika vanofanira kusanganisira zvimwe zvigadziro zvinosvika kunze kweIndia, Barbadian, Nigerian, uye Puerto Rican. Asi iyo inguva duku "tora" yezvichazoitika: Wang anovimbisa zvimwe zvinyorwa zvese sezvavanoswedera pakuzarura usiku munguva yekupera kwaApril.
Ko Queens International Night Market vatengesi vanochinja kubva vhiki nevhiki?
Kusiyana nedzimwe misika, Wang haamanikidzi vatengesi kuti vaite kwenguva yose, saka inogona kusiyanisa vhiki nevhiki. "Kazhinji pane imwechete kana vaviri vatengesi vhiki imwe neimwe," akatsanangura kudaro. Kana mutengesi wezvokudya ari kunyanya kuda, tinofanotaura kuti iwe uchaona mutengesi nguva dzose.
Ndinofanira kutora nguva yakareba sei kuti ndishanyire Queens International Night Market?
Ramba uchiyeuka kuti zvipiriso zveusika zvinopfuura kudya. Gore rino richaona kudzoka kwewaini yakakurumbira / yewaini yewaini, pamwe nekuwedzera kwemitambo mitsva, mabasa, uye maitiro ekurarama. Neshamwari nehutano hwekunze kwemazingira, zvokudya zvikuru uye zvinwiwa, mapoka mahedheni, kuita zviitiko, nemhando dzose dzekunakidza ... iwe unogona kungozviwana iwe uchipedza manheru ose pano. Uye izvi zvakanaka - iri Night Market, shure kwezvose!
Zvinhu Zvinofadza Kuita Zuva reSt. Patrick muNyC
Chelsea Market / Meatpacking Chikafu Chikafu uye Utsika Kufamba Kufamba
Pamusoro 5 Museums muQueens
Ndeipi Rinoenda kuBrooklyn Cherry Trees?
Easter Services Church muNew York City
Pemberera Cinco de Mayo muBrooklyn
Yakanaka uye Yakanakisa Imba uye Zvokufambisa muTacoma
Top Hanoi Old Quarter Hotels for Your Next Stay muVietnam
Urbino Vashanyi Vanotungamira
Edzai Tea Inobva Iko Yakanakisisa Tea VeLondon Suppliers
Mutsara weMitemo Yakabatana neCalifornia Mission History
Hove Fries muPittsburgh
Pamusoro 8 Mhemberero dzeApt Okberberfest
Royal Ascot - Zuva Rinokosha Mumadzinza
6 Nzira dzakanaka dzekupemberera Krisimasi muParis
Mhemberero yeMore Moore muMoyland 2017
Kwokuenda kuRoma kunotora Mifananidzo Yakanakisisa
Nyanzvi Q & A: Ramangwana rekuita Kutenga PaGwendo
Top Winter Festivals muU.SA